DIL DILAAC SOO DAAHIRAY: ”Adeer xulufo uma nihin inaan agab xarbigaaga iibsanno!!” – Wasiirka Gaashaandhigga Faransiiska oo runta u sheegay Maraykanka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DIL DILAAC SOO DAAHIRAY: ”Adeer xulufo uma nihin inaan agab xarbigaaga iibsanno!!”...
DIL DILAAC SOO DAAHIRAY: ”Adeer xulufo uma nihin inaan agab xarbigaaga iibsanno!!” – Wasiirka Gaashaandhigga Faransiiska oo runta u sheegay Maraykanka
(Paris) 19 Maarso 2019 – Yurub waa inay maaro u heshaa ku tiirsanaan buuxda ee amaan ee hubka Maraykanka, sida uu hoosta ka xarriiqay Wasiirka Gaashaandhigga Faransiiska, isagoo cambaareeyay wajihitaanka ”shuruudaysan” ee uu Donald Trump kula macaamilayo xulufada NATO iyo Yurub.
Wasiirka ayaa walaac ka muujiyay siyaasadda cusub ee Maraykanka ee u muuqata mid isku xireeysa xulufannimada NATO iyo “iibsiga hubka Maraykanku farsameeyo,” sida uu caddeeyay Wasiirka Gaashaandhigga, Florence Parly, oo ay is waydiiyey inta uu sii jiri karo isbahaysigani.
”Isbahaysigu waa inuu noqdaa shuruud la’aan, hadii kale, ma aha isbahaysi. Xeerka hiillada NATO waxaa la yiraahdaa Article 5, ee ma aha Article F-35.” ayuu ku dooday Wasiirku.
Dalal badan oo ka tirsan NATO sida Turkey iyo kuwo xulufo la ah ayay isku dheceen Maraykanka oo si cad ula soo istaagey in ay wax kata ku xiran yihiin in hubkiisa la iibsado.
Wasiir Parly ayaana caddeeyay inaysan sax ahayn in la isku xiro labada arrimood, iyadoo ay muuqato in uu Maraykanku dalalkaa suuq ka dhiganayo.
Tusaale ahaa, NATO waxay Maraykanka iminka ka iibsataa 100% dayuurada wax duqeeya ee istaraatijiga ah iyo hannaanada difaaca gantaalaha sida Patriot, THAAD iwm, sidoo kale 92& dayuuradaha is wada ee daroonnada iyo 91% dayuuradaha booyadaha ah ee ka shaqeeya shidaal siinta dayuuradaha kale.
Yeelkeede, waxaa bilowday dildillaac, gunuunuc iyo qanaaco la’aan ka muuqanaysa dalalka caalamka ee Maraykanka la ologga ah oo ay ugu horreeyaan kuwa Yurub.
Hindiya ayay sidoo kale arrintan iskula dhacsan yihiin Maraykanka.
Previous articleHALIS GUUD: Al Jazeera oo bannaanka soo dhigtay sirta ”heshiiska” Dekedda Berbera & Dahabshiil oo door laxaad leh ku yeelatay! (Daawo)
Next articleWararkii ugu dambeeyay ee degmada Balcad iyo ciidamada dowladda oo dib u qabsaday